Ukuqonda Ukwehlukaniswa Kwamakheli, Ukubekwa Kwesimo Esimisiwe, kanye Ne-Delivery APIs | Martech Zone
Ukuqonda Ukwehlukaniswa Kwamakheli, Ukubekwa Kwesimo Esimisiwe, kanye Ne-Delivery APIs
NgoLwesihlanu, ngoJuni 26, i-2020 NgoMsombuluko, Novemba 2, 2020 Douglas Karr
Ngaphambi kokusebenza ku-inthanethi, ngisebenze iminyaka eyishumi emaphephandabeni futhi ngiqondisa izimboni zeposi. Ngoba ukuthumela noma ukuletha ukuxhumana kwezokumaketha ngokomzimba kwakubiza kakhulu, sasiqaphele kakhulu ngenhlanzeko yedatha. Besifuna ucezu olulodwa ngomndeni ngamunye, hhayi ngaphezulu. Uma sihambisa inqwaba yezingcezu ezifanayo zeposi ekhelini, kudale izingqinamba eziningi:
Umthengi okhungathekile ongakhetha ukuphuma kukho konke ukuxhumana kwezokukhangisa.
Izindleko ezingeziwe zokuposa noma ukulethwa kanye nezindleko ezengeziwe zokuphrinta.
Ngokuvamile, besidinga ukuthi sibuyisele imali umkhangisi lapho eletha ukulethwa okuyimpinda.
Ngokwengeziwe, amakheli abengaphelele noma abengalungile abedinga ukubuyiselwa kwemali nezindleko zokulethwa ezingadingekile futhi.
Cishe ama-20% amakheli afakwe ku-inthanethi aqukethe amaphutha - amaphutha esipelingi, izinombolo zendlu ezingalungile, amakhodi eposi angalungile, amaphutha wokufomatha angahambisani nemithetho yeposi yezwe. Lokhu kungaholela ekuthumeleni sekwedlule isikhathi noma okungathumeleki, ukukhathazeka okukhulu futhi okubizayo ezinkampanini ezenza ibhizinisi ngaphakathi nasemingceleni.
Ikheli yokuqinisekisa akulula njengoba kungazwakala kunjalo. Ngaphandle kwezinkinga zesipelingi, njalo ngesonto kunamakheli amasha afakwa ku-database kazwelonke yamakheli ahanjiswayo ezweni. Kukhona futhi namakheli aguqulwa, njengoba izakhiwo zishintsha zisuka kwezentengiselwano ziye kwezokuhlala, noma umndeni owodwa uye ezindlini ezinemindeni eminingi, umhlaba wamapulazi uhlukaniselwa ezindaweni ezingomakhelwane, noma wonke amadolobha athuthukiswa.
Inqubo Yokuqinisekisa Ikheli
Ikheli lidlulisiwe - ngakho-ke inombolo yasendlini, ikheli, izifinyezo, izipelingi ezingekho kahle, njll.
Ikheli lenziwe lifane - uma selidlulisiwe, ikheli libe seliphinda liguqulwa libe sezingeni. Lokhu kubalulekile ngoba I-123 Main St. futhi I-123 Main Street izobe seyenziwa ibekwe esimeni se- I-123 Main St futhi impinda ingafaniswa futhi isuswe.
Ikheli liqinisekisiwe - Ikheli eliqinisekisiwe liyamataniswa ne-database kazwelonke ukubona ukuthi ikhona ngempela.
Ikheli liqinisekisiwe - akuwona wonke amakheli ahanjiswayo yize ekhona. Lolu wudaba olulodwa izinsizakalo ezinjengeGoogle Maps ezinalo… zikunikeza ikheli elivumelekile kepha kungahle kungabikho sakhiwo lapho ongaletha kuso.
Kuyini Ukuqinisekiswa Kwamakheli?
Ukuqinisekiswa kwekheli (okwaziwa nangokuthi ukuqinisekiswa kwamakheli) inqubo eqinisekisa ukuthi amakheli asemgwaqweni naseposini akhona. Ikheli lingaqinisekiswa ngenye yezindlela ezimbili: ngaphambili, lapho umsebenzisi efuna ikheli elingalungile noma elingaphelele, noma ngokuhlanza, ngokuhlaziya, ngokufanisa nokufomatha idatha kusizindalwazi ngokumelene nedatha yeposi eyisithenjwa.
Kuyini ukuqinisekisa kwekheli? Kuchazwe izinzuzo nezimo zokusetshenziswa
Ukuqinisekiswa kwekheli nokuqinisekiswa kwekheli (Incazelo ye-ISO9001)
Akuwona wonke amasevisi amakheli afanayo, noma kunjalo. Izinsizakalo eziningi zokuqinisekisa ikheli zizosebenzisa izindlela zemithetho ukufanisa i-database. Ngamanye amagama, insizakalo ingasho ukuthi ngaphakathi kwe-zip 98765 ukuthi kukhona ifayela le- I-Street Main futhi iqala kukheli 1 iphele ku-150. Ngenxa yalokho, i-123 Main St iyi-a evumelekile Ekhaya kususelwa kumqondo, kepha hhayi ngempela a iqinisekisiwe ikheli lapho okuthile kungalethwa khona.
Lokhu futhi kuyinkinga ngezinsizakalo ezihlinzeka ngobude nobude ngekheli elithile. Eziningi zalezo zinhlelo zisebenzisa izibalo ukuze zihlukanise ngokunengqondo amakheli kubhulokhi bese zibuyisa ubude nobude bekhompyutha. Njengoba abathengisi, izindawo zokudlela, kanye nezinsizakalo zokulethwa zisebenzisa i-lat / ende ukulethwa ngokomzimba, lokho kungadala izingqinamba eziningi. Umshayeli angaba maphakathi nebhulokhi futhi angakwazi ukukuthola ngokususelwa kudatha eseduze.
Ukuthwebula idatha yekheli
Ngisebenza nensizakalo yokulethwa njengamanje lapho abathengi befaka imininingwane yabo yamakheli, inkampani ithumela ukulethwa nsuku zonke, bese ibahambisa isebenzisa isevisi ehlukile. Nsuku zonke, kunenqwaba yamakheli angenakuthunyelwa okufanele alungiswe ngaphakathi kohlelo. Lokhu ukuchitha isikhathi kunikezwe ukuthi kunezinhlelo ezingaphatha lokhu.
Njengoba sisebenzisa kahle uhlelo, sisebenzela ukulinganisa nokuqinisekisa ikheli lapho singena. Leyo yindlela engcono yokuqinisekisa ukuhlanzeka kwedatha yakho. Thula ikheli lokulethwa eliqinisekisiwe, eliqinisekisiwe kumthengi lapho engena bese ubavumela bavume ukuthi lilungile.
Kunamazinga ambalwa ofuna ukuwabona ukuthi amapulatifomu asebenzisa:
Isitifiketi se-CASS (E-United States) - Uhlelo lwe-Coding Accuracy Support System (i-CASS) lwenza i-United States Postal Service (USPS) ikwazi ukuhlola ukufaneleka kwesoftware elungisa futhi ifane namakheli emigwaqo. Izitifiketi ze-CASS zinikezwa bonke abathumeli ma-imeyili, ama-bureau asezinsizakalweni, nabathengisi be-software abangathanda ukuthi i-USPS ihlole ikhwalithi yesoftware yayo yokufanisa amakheli futhi ithuthukise ukunemba kwe-ZIP + 4, umzila wesithwali, nokufakwa amakhodi ezinombolo ezinhlanu.
Isitifiketi se-SERP (Canada) - Uhlelo Lokuhlola Nokuqashelwa Kwesoftware isitifiketi seposi esikhishwe yiCanada Post. Inhloso yalo ukuhlola ikhono lesoftware ethile yokuqinisekisa nokulungisa amakheli okuposa.
Ama-API Wokuqinisekisa Ikheli
Njengoba ngishilo ngenhla, akuzona zonke izinsizakalo zokuqinisekisa amakheli ezenziwa zilingane - ngakho-ke uzofuna ukubuka zonke izinkinga ezingase zivele. Ukonga amasenti ambalwa ngensizakalo yamahhala noma eshibhile kungakudalela amadola ezinkingeni zokulethwa ezisezansi
UMelissa okwamanje uyanikela amasevisi wokuqinisekisa ikheli yamahhala izinyanga eziyisithupha (kuze kufike kumarekhodi ayi-100K ngenyanga) ezinhlanganweni ezifanelekayo ezifanele ukusebenzela imiphakathi ngesikhathi sobhadane lwe-COVID-19.
Iminikelo yesevisi kaMelissa COVID-19
Nawa ama-API adume kakhulu wokuqinisekiswa kwekheli. Uzobona ukuthi ipulatifomu eyodwa edumile ayikhulunywa - IGoogle API API. Lokho kungenxa yokuthi akuyona insizakalo yokuqinisekisa ikheli, yifayela le- i-geocoding insiza. Ngenkathi ifanisa futhi ibuyisa ububanzi nobude, akusho ukuthi impendulo iyikheli elihambisekayo, elibonakalayo.
I-Easypost - Ukuqinisekiswa kwekheli lase-US nokuqinisekiswa kwekheli lomhlaba wonke elikhula ngokushesha.
I-Experian - ukuqinisekiswa kwekheli emazweni angaphezu kuka-240 nezindawo emhlabeni wonke.
udumo - Ngemininingwane evela emazweni angaphezu kwama-240 emhlabeni wonke, iLob iqinisekisa amakheli asekhaya nawakwamanye amazwe.
I-Loqate - Isixazululo sokuqinisekisa ikheli esizobamba, sihlaziye, silinganise, siqinisekise, sihlanze futhi sifomethe idatha yekheli lamazwe nezindawo ezingaphezu kwama-245.
Melissa - iqinisekisa amakheli wamazwe nezindawo ezingama-240 + lapho kungenwa khona naku-batch ukuqinisekisa ukuthi kuphela amakheli wokukhokha nokuthumela avumelekile athathwa futhi asetshenziswe ezinhlelweni zakho.
I-SmartSoft DQ - Inikela ngemikhiqizo ezimele yodwa, ama-API wokuqinisekisa ikheli namathuluzi angamathuluzi azongena kalula ezinhlelweni zakho ezikhona ezincike ekhelini.
I-SmartyStreets - Ine-US address address API, Zip Code API, Autocomplete API, namanye amathuluzi okuhlanganisa ezinhlelweni zakho zokusebenza.
TomTom - Isici sesicelo se-TomTom Online Search sika-geocoding sinikeza isisombululo esisebenziseka kalula sokuhlanza idatha yekheli nokwakha i-database yezindawo ezi-geocoded.
Tags: ikheli apiidatha yekheliikheli le-geocodingukuhlukaniswa kwekheliukwenziwa kwamakheliukuqinisekiswa kwekheliukuqinisekisa ikhelisifisiisoxnumxlobloqaIdatha kaMelissasmartsoft dqTomtom